Voina · Mey, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Mey, 2018
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Mey, 2018
Goatemalà: Oram-batravatra Sy Tondradrano Namely Ireo Tena Fadiranovana
Amerika Latina 25 Mey 2018
Mampalahelo ny mamaky ny momba ny karazana loza voajanahary tahaka izao isantaona ary dia tratra foana ny faritra sasany. Mandritra izany fotoana izany, tsy misy fepetra, na kely aza, na politikam-panjakana napetraka mba hilazàna mialoha ny ho fahavoazana. Midangana be anefa ny sandany : famoizana ain'olona, trano, vokatra lasan'ny rano tondraka
Ho voavahan'ny minisitry ny tontolo iainana vaovao ao Dominika ve ireo haika navelan'ny rivodoza Maria?
Karaiba 25 Mey 2018
Amin'izao fotoana izao dia maro loatra ny olona tsy ampy torohay amin'izay azon-dry zareo antenaina amin'ny programa famerenana amin'ny laoniny sy [...] hanomboka hampisy fahasamihafana amin'ny fiainan-dry zareo.
Shina: Fikarohana izay nidaroka baomba fiara fitateram-bahoaka tao Kunming
Azia Atsinanana 05 Mey 2018
Taorian'ny fanapoahana fiara fitateram-bahoaka tao Kunming omaly, nampiseho tantara tao amin'ny pejim-baovaon'ny Netease ny tatitra avy amin'ny tranonkalam-baovao iray ao an-toerana momba ny fisavàna kara-panondro ataon'ny polisy mitam-piadiana eny an-dalana.
Shina: Mpanapoaka baomba miteraka sahotaka sy fahatezerana
Azia Atsinanana 04 Mey 2018
Tsy ny tao an-tanàna ihany no tohina tamin'ilay fanapoahana baomba ny bus fa i Shina mihitsy, fa mahatsapa tampoka ny fahakaikezan'ny fampihorohoroana ny olona. Ny nampiavaka ny fanafihana dia ny tsy manantsiny no lasibatra fa tsy ny manampahefana, mahatonga azy ho miavaka manoloana ny korontana teo aloha. Kisendrasendra fotsiny ve?